Madaxweynaha DFKM Shariif Sh Ahmed oo maalintii 2aad ku sugan Degmada Afgooye.
June 12, 2012 - Written by Muqdisho:-Madaxweynaha DFKM Shariif Sheekh Axmed ayaa ku sugan yahay Degmada Afgooye ee Gobalka Shabeelaha Hoose maalintii labaad waxaana uu kulamo kula qaatay saraakiisha ciidanka DFKM iyo kuwa AMISOM iyo odayaasha Degmada Afgooye.
Madaxweynaha DFKM Shariif Sheekh Ahmed ayaa waxaa uu kala hadlay odayaasha Degmada Afgooye sugida amaanka iyo dhibaatada ay ciidamada DFKM ay ka geysteen gudaha Degmada Afgooye iyo sidii wax looga qaban lahaa.
Madaxweynaha DFKM Shariif Sheekh Ahmed ayaa sheegay in ujeedada safarkiisa uu yahay sidii uu ula tashan lahaa saraakiisha DFKM iyo maamulka gobolka iyo kan Degmada Afgooye si loo xaqiijiyo amaanka lagana hortago in wax dhibaato ah loo geysto shacabka ku dhaqan Degmada Afgooye.
Dhinaca kale Wararka naga soo gaaraya Degmada Balcad ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaq ciidan uu ka socdo inta u dhaxeysa Balcad iyo Muqdisho waxaana laga dareemayaa diyaargarow dagaal ay wadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Al-Shabaab.